I-Liling xingtailong yenza futhi inikeze I-High Performance Fire Assay Crucibles.
Ukuhlolwa komlilo kusetshenziselwa ukuhlola okuqukethwe kwensimbi eyigugu kumaminerali. I-ceramic fire assay crucible yethu yenziwe ngezinto ezingavuthiwe zekhwalithi ephezulu njenge-alumina, i-mullite ne-kaolin, njll.
Isetshenziswa ezimayini zegolide, isitshalo se-metallurgical kanye nezinye izindawo zokuhlaziya isampula yensimbi. Imela izinga lokushisa eliphezulu lika-1350C.
Usayizi owenziwe ngokwezifiso uyamukeleka.Ikhwalithi ephezulu kanye nesevisi esheshayo umgomo wethu.
I-L.O.I(ukulahlekelwa ekuthungeleni) 0.21%
Ubukhulu bekesi lezinkuni (mm)
I-XTL-30g 88 110 250 1070*1070*1080 2310 46200
I-XTL-40g 88 135 350 1110*1070*1080 1980 39600
I-XTL-45g 88 160 500 1080*1170*1080 1296 25920
I-XTL-45g 90 155 680 1140*1030*1120 1296 25920
I-XTL-50g 105 150 700 1140*1030*1120 1530 30600
I-XTL-65g 105 165 720 1140*1030*1120 1425 28500
I-XTL-750 120 160 750 1080*1170*1080 900 18000
Gem30 Gem40 Gem45 Gem50 Gem65 Crucible izinga lokushisa eliphezulu crucible